Assistive Touch - Android အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူ APK ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Assistant Touch ကို - လြယ္ကူ Touch ကို
Assistant Touch ကို - လြယ္ကူ Touch ကို APK ကို
Assistant Touch ကို Android ထုတ်ကုန်များအတွက်ရရှိနိုင်ကာလွယ်ကူသောထိတွေ့ utility ကိုကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ device ကိုမျက်နှာပြင်သော့ခတ်သို့မဟုတ် unlocked နေစဉ်ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးထိတွေ့ floating menu ကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဒါဟာ IOS ကိုစတိုင်ရန်အလွန်ဆင်တူသည်။ ဒါဟာအချိန်မဆိုအမှတ်မှာဝင်ရောက်နိုင်သည့် device ကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တစ်ဦးရေပေါ်အိုင်ကွန်ကိုထောက်ပံ့ပေး cost.The app ကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါရေပေါ်အိုင်ကွန်ကိုတောင်သော့ခတ် screen ပေါ်မှာဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများအဘို့အမှုအရာတို့ကိုပိုမိုအဆင်ပြေပြုလုပ်ခြင်း။ Assistant ထိတွေ့ app ကိုနှင့်အတူတဦးတည်းလျင်မြန်စွာအားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံး app များ, ဂိမ်းများ, အပြင်အဆင်များနှင့်အများကြီးပိုပေးရန်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျနောက်ခံ apps များ running ရှင်းလင်းဖို့မြန်နှုန်းအာနိသင်တိုးမြှင့်ကိုသုံးနိုင်သည်, သင့်ဖုန်းကိုအလုပ်ကပိုပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။ Assistant Touch ကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုကနေအိမ်နှင့်အသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်နဲ့တူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်ကာကွယ်ပေးရန် App ဖြစ်ပါတယ်။
quick setting များကိုပါဝင်သည်:
1 ။ မေးပါ: ဒီ app ကို uninstall လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
- သင်သော့ခတ်မျက်နှာပြင် function ကိုသုံးလျှင်သင်ဤအကူအညီများ Touch ကို uninstall လုပ်ဖို့လိုလျှင်သုံးစက်ကို click ပြီးတော့ဖယ်ရှားရန် button ကို click ကျေးဇူးပြု. ဒါကြောင့် Device ကိုအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အလှည့်လိုအပ်သည်။
2 ။ မေးပါ: ကျွန်ုပ်၏ဖုန်း Screenshot function ကို Capture ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘာကြောင့်လဲ
- Screenshot ကို Android 5.0 သို့မဟုတ်မြင့်မားသောသာမရရှိနိုင် Capture ။
- သာဖလက်ရှမီးဖွင့်ဖို့ကင်မရာ, ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်အခြားရည်ရွယ်ချက်မယူ။
- "ဒီ app ကိရိယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ "
BIND_DEVICE_ADMIN ခွင့်ပြုချက်သာသင့်ရဲ့ device ကိုသော့ခတ်ဖို့အသုံးပြုနေသည် .. App ကိုမဆိုအခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ခွင့်ပြုချက်ကိုမသုံးပါဘူး။
- "ဒီ app Accessibility န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါတယ်။ "
- သင်ဖုန်းခေါ်နိုင်အောင် Panel ကိုမှအဆက်အသွယ် Add မှ CALL_PHONE ။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကို access လုပ်ဖို့အထက်ပါခွင့်ပြုချက်မဆိုမသုံးကြဘူး။
အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟု, play စတိုးမှာ app သို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်ထောက်ခံမှုအားဖြင့်သင်တို့၏အကြံပြုချက်များနှင့်တုံ့ပြန်ချက်များကိုပေးပါ။ Assistant ထိတွေ့သုံးပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
1 ။ အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က themes များမိတ်ဆက်ခြင်း။
2 ။ screenshot, လတ်တလော apps များ, WIFI Hotspot, ချဲ့ထွင်အကြောင်းကြားစာဘားနှင့်ပစ်လွှတ်ကင်မရာ shortcuts တွေကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
3 ။ UI ကို / UX ကိုတိုးမြှင့်မှုများ
ကျနော်တို့ဖမ်းမိမျက်နှာပြင်ရိုက်ချက်များကယ်ဖို့ WRITE_EXTERNAL_STORAGE ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံပါ။
Assistant Touch ကို - လြယ္ကူ Touch ကို
6.12 ကို MB
အန်းဒရွိုက် Appz Labs က